Chelsea Oo Shaacisay Muddada Niyad-jabka Ah Ee Uu Garoomada Ka Maqaanayo Ben Chilwell - Laacib
HomeWararka CiyaarahaChelsea Oo Shaacisay Muddada Niyad-jabka Ah Ee Uu Garoomada Ka Maqaanayo Ben Chilwell
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa shaacisay muddada uu garoomada ka maqnaan doono difaaca bidix ee reer England ee Ben Chilwell, kaas oo dhaawac culus kasoo gaadhay ciyaartii horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League ee Salaasadii ay 3-0 ku garaaceen Juventus.
Chilwell ayuu dhaawac ka gaadhay jilibka markii ay isku dhaceen ciyaartoy ka tirsan Juventus, waxaanay sawirradii ugu horreeyey ee baadhitaannadu ay muujiyeen inuu muddo dheere maqnaan doono.
Chelsea ayaan wali go’aan ka gaadhin in qalliin lagu sameeyo Ben Chilwell iyo in kale, hase yeeshee meesha lagama saarin suurtogalnimada in mindida loo qaadan doono, taas oo haddii ay dhacdo isbeddel ku samayn doonto waqtiga hadda la sheegay inuu maqnaanayo.
Wargeyska The Sun ayaa sheegay, inuu xogo ka helay kooxda Chelsea, kuwaas oo u xaqiijiyey in ugu yaraan muddo lix toddobaad ah uu Ben Chilwell garoomada ka maqnaandoono haddii uu ka baaqsado in qalliin lagu sameeyey.
Laacibkan oo markii uu garoonka ka baxayay ay garbaha hayeen laba qof oo shaqaalaha caafimaadka ah, ayaa markii hore laga baqayay inuu muddo sagaal bilood ah garoomadaka maqnaado haddii uu dhaawaciisu noqdo carjawda jilibka, hase yeeshee halkaas ma aha meesha uu dhaawacu ka gaadhay.
Tababare Thomas Tuchel oo warbaahinta la hadlay Jimcihii maanta ayaa sheegay inuu rajaynayo in Ben Chilwell uu garoomada ka maqnaado lix usbuuc kaliya, isaga oo meesha ka saaray walwalkii badnaa ee ahaa inuu xilli ciyaareedka macasalaameeyey.
Adoomeydi mey dhamaatay markii chelwell la sugayo
4 afarta dhe mudane